အမှုန့်သတ္တုဗေဒ အစိတ်အပိုင်းများ ပြုလုပ်နည်း
Powder metallurgy သည် သတ္တုပြုလုပ်ရန် သို့မဟုတ် သတ္တုမှုန့် (သို့မဟုတ် သတ္တုမှုန့်နှင့် သတ္တုမဟုတ်သော အမှုန့်အရောအနှော) ကို အသုံးပြုရန်၊ ထုလုပ်ခြင်းနှင့် ကြိတ်ချေခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း ပြီးနောက် သတ္တုပစ္စည်းများ၊ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများနှင့် ထုတ်ကုန်နည်းပညာ အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုခြင်း။အမျိုးအစား...
Sintering Methods of Powder Metallurgy (အမှုန့်သတ္တုဗေဒ sintering) Powder metallurgy sintering method တွင် အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်- Powder metallurgy သည် အမှုန့်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ နှိပ်ခြင်း၊ sinteri...
China Powder metallurgy gear ကို ထုတ်လုပ်သည်။
Powder metallurgy ဂီယာ Gears များသည် manual ဂီယာ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ဂီယာများသည် ဂီယာမျက်နှာပြင်အနီးတွင်ရှိသော ဖိစီးမှုအထွတ်အထိပ်များဖြင့် meshing လုပ်နေစဉ်အတွင်း တွန်းအားဖိအားကို ခံရပါသည်။ထို့ကြောင့် ဂီယာများသည် အဓိကအားဖြင့် မြင့်မားသော ခွန်အားနှင့် မြင့်မားသော ...
Powder metallurgy သည် အမျိုးမျိုးသော သတ္တုအမှုန့်များကို လေ့လာပြီး ထုတ်လုပ်သည့် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အမှုန့်များကို သတ္တုပစ္စည်းများနှင့် ထုတ်ကုန်များကို နှိပ်ခြင်း၊ ကြိတ်ချေခြင်းနှင့် လိုအပ်သော နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် သတ္တုပစ္စည်းများနှင့် ထုတ်ကုန်များကို ပြင်ဆင်ရန် ကုန်ကြမ်းများအဖြစ် အသုံးပြုသည်။အဲဒါဟာ မားစ်...
Powder metallurgy ကို အမှုန့်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ နှိပ်ခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်း၊ ကြိတ်ခြင်း နှင့် ပြုပြင်ခြင်း အပြီးတွင် ကြိတ်ခြင်း သည် အမှုန့်သတ္တုဗေဒ ၏ အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းစဉ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။sintering လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အမှုန်အမွှားများ စီးဆင်းခြင်း၊ ပျံ့လွင့်ခြင်း၊ အရည်ပျော်ခြင်း၊
MIM လုပ်ငန်းစဉ်လျှောက်လွှာ (1) မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများ- လေအိတ်များအတွက် အစိတ်အပိုင်းများ၊ ကားသော့ခတ်ရန်အတွက် အစိတ်အပိုင်းများ၊ ထိုင်ခုံခါးပတ်များအတွက် အစိတ်အပိုင်းများ၊ ကားတံခါးဓာတ်လှေကားစနစ်များ၊ pinions၊ မော်တော်ယာဥ်လေအေးပေးစက်အတွက် သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းများ၊ ဘရိတ်စနစ်များတွင် ထိန်သိမ်းများ စသည်ဖြင့် အာရုံခံကိရိယာရှိ သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းများ ...
MIM ၏ လုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်သာရကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှ၊ ၎င်းသည် လက်ရှိတွင် အရည်ပျော်မှတ်မြင့်မားသော ပစ္စည်းများ၊ စွမ်းအားမြင့် နှင့် ရှုပ်ထွေးသော ပုံသဏ္ဍာန် အစိတ်အပိုင်းများကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အသင့်တော်ဆုံး လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။၎င်း၏ အားသာချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုံးနိုင်ပါသည်။ (၁) MIM သည် va...
MIM (Metal Injection Molding) သည် Metal Injection Molding ၏ အတိုကောက်ဖြစ်သည်။၎င်းသည် သတ္တုမှုန့်၏ ပလတ်စတစ်အရောအနှောကို မှိုတစ်ခုထဲသို့ ထိုးသွင်းသည့် ပုံသွင်းနည်းဖြစ်သည်။၎င်းတွင် ရွေးချယ်ထားသော အမှုန့်ကို binder ဖြင့် ရောစပ်ပြီး...
China Aluminum Die-casting ဘယ်လိုလဲ။
admin မှ 22-02-08 ရက်နေ့တွင်
Aluminum Die-casting သည် Pressure Casting အစိတ်အပိုင်း တစ်မျိုးဖြစ်သည်။၎င်းသည် သွန်းမှိုဖြင့် တပ်ဆင်ထားသော ဖိအား-သွန်းလုပ်သည့် စက်သေတ္တာကို အသုံးပြုသည်။အလူမီနီယမ် သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ်အလွိုင်းကို အရည်အခြေအနေအဖြစ် အပူပေးပြီး အသေခံကာစတီ၏ feed port ထဲသို့ လောင်းထည့်သည်...
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမှုန့်သတ္တုဗေဒ အစိတ်အပိုင်းများကို မော်တော်ဆိုင်ကယ် ထုတ်လုပ်ရေးတွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာရသနည်း။
မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်ရေးတွင် အမှုန့်သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ၎င်း၏ စီးပွားရေးနှင့် ခွဲခြား၍မရသောကြောင့် အောက်တွင် ဥပမာများဖြင့် ရှင်းပြပါမည်။1. အမှုန့်သတ္တုဗေဒ လုပ်ငန်းစဉ်၏ အကြီးမားဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲမှ တစ်ခုမှာ ၎င်းတွင်...
MIM Process ကို အသုံးပြုဖို့ စဉ်းစားတဲ့အခါ
MIM ကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားသောအခါ၊ ၎င်းကိုအောက်ပါအချက်များမှတိုင်းတာနိုင်သည်။ပထမအချက်မှာ ကုန်ပစ္စည်း၏ ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်သည်။MIM သည် ရှုပ်ထွေးသော အစိတ်အပိုင်းများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော ဒီဇိုင်းကိုရရှိရန်အတွက် ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းများစွာ လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများ f...
အမှုန့်သတ္တုဗေဒတွင် အဆင့်များကား အဘယ်နည်း။
အပူကုသမှု၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ပွတ်ခြင်းပြီးနောက် အမှုန့်သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ မျက်နှာပြင် ကုသမှု) သံမဏိအမှုန့်သတ္တုဗေဒနှင့် သံမဏိအမှုန့်သတ္တုဗေဒအတွက် သင့်လျော်သော 1. ဆီများကို ဖယ်ရှားပြီး အပူချိန်မြင့်မြင့်တွင် ကပ်တွယ်မှုကို ဖယ်ရှားနိုင်စေရန်အတွက် ဆီနှင့် ကော်များအတွင်း...
Powder metallurgy ဆိုသည်မှာ သတ္တုပြုလုပ်ရန် သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန်...
Sintering Methods of Powder Metallurgy (...
Powder metallurgy gear Gears are key s...
Powder metallurgy သည် သိပ္ပံနည်းကျ ...
Powder metallurgy ကို po ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်...